ကြားနေသို့မဟုတ်လက်ခံမှု? Self- ရိပ်မိပြProbleနာအပြာစာပေအသုံးပြုမှု (2019) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်သည်ဖြေရှင်းမှုဖြင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သည့်အမျိုးသားများ၏အတွေ့အကြုံများအဖြစ်အပျက်စီးရီး
Abstinence သို့မဟုတ်လက်ခံ? ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Addressing အနေနဲ့ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးနှင့်အတူယောက်ျားရဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်စီးရီး (2019)
Sniewski, လုကာနဲ့Panteá Farvid ။
လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း (2019): 1-20 ။
self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (SPPPU) မကြာသေးမီကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့် compulsive သုတေသနအတွက်အရေးပါတဲ့ဧရိယာဖြစ်လာသည်။ SPPPU နှင့်အတူလိင်ကွဲယောက်ျားထောက်ခံသို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ကုသမှုရွေးချယ်စရာတစ်ခုမရှိခြင်းသတင်းပို့ပါ။ သူတို့တစ်တွေသတိ-based ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစီအစဉ်ကိုခံယူအဖြစ်ဤဆောင်းပါးကိုတှငျကြှနျုပျတို့ SPPPU နှင့်အတူယောက်ျား၏ခြောက်လရောဂါဖြစ်ပွားမှုအပေါ်သတင်းပို့ပါ။ ဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုစဉ်အတွင်းယောက်ျားရဲ့တစ်ဦးချင်း, ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ရောင်ပြန်အတွေ့အကြုံများသို့ သာ. ကြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းနေ့စဉ်သစ်ခုတ် Spreadsheets, ဒိုင်ယာရီနှင့် prerecorded ပဲ့ထိန်းဆင်ခြင်အသုံးပြုသွားမည်တစ်ဦးရောနှောသုတေသနနည်းစနစ်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ရလဒ်များဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဒီဇိုင်းနှင့် setting ကိုသိသိသာသာအသုံးပြုသွားမည်သီးခြားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများလွတ်လပ်သော, SPPPU addressing ကိုရည်ရွယ်ကြားဝင်များ၏ထိရောက်မှု impact နိုင်သည်ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ရလဒ်များညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု Self-လက်ခံမှုနှင့်လက်ခံမှုကိုပိုလက်တွေ့ကျလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့် abstinence ထက်မှီဖြစ်ကြောင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အပိုဆောင်းတွေ့ရှိချက်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည်အောင်မြင်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်ရလဒ် SPPPU နှင့်အတူလူအဖြစ်သူတို့ SPPPU မှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်ရန်အဖြစ်ယောက်ျားရင်ဆိုင်ရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုကိုယ်စားပြုရာ၏အမျိုးမျိုးသော Contextual ရှုထောင့်ဖော်ထုတ်နှင့်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသုတေသနကွာဟမှုကိုဖြည့်ဖို့စတေယျ။
comments: သုတေသီများကဘာဝနာအလုပ်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများနှင့်-ins စစ်ဆေးပါ။ အားလုံး6ဘာသာရပ်များဘာဝနာအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေတှေ့ရပုံရသည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့2porn-သွေးဆောင် ED (PIED များကိုဖြေရှင်းမဖျောပွထား) ရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှပုံပြင်များကိုဖတ်ရှု။ အနည်းငယ်ဖြစ်ပွားမှုတင်းမာမှုပါဝင်မှပေါ်လာပါသည်။ တဦးတည်းဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေဖော်ပြသည်။
Preston (34, M_aori) တာဝန်ခံမှု၏ဖွပါဝါ
Preston Self-ဖော်ထုတ် SPPPU နှင့်အတူသူစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအပေါ် ruminating သုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့လို့ပဲ။ သူ့ကိုရန်, ညစ်ညမ်းတဲ့အသည်းအသန်ဝါသနာထက်ကျော်လွန်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်နှင့်ညစ်ညမ်းသူ၏အသက်တာ၏ဗဟိုရှိရာတစ်ဦးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီခဲ့သည်။ သူအများအပြားနာရီနေ့အဘို့ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံတင်ပြ, သူ့ကြည့်အစည်းအဝေးများများအတွက်တိကျသောကြည့်ထုံးတမ်းဖန်တီးခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော် (ဥပမာ, ကြည့်ရှုကြည့်ရှုပြီးနောက်မိမိအဘရောက်ဇာကိုသမိုင်းရှင်းလင်းရေးနှင့်အလားတူလမ်း၌မိမိကြည့်ရှုပြီးနောက်တက်သန့်ရှင်းရေးမပြုမီတိကျတဲ့နှင့်စနစ်တကျလမ်းအတွက်သူ့အခန်း, အလင်းရောင်နှင့်ကုလားထိုင်တက် setting) နှင့် PornHub, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း website တွင်တစ်ဦးထင်ရှားတဲ့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသိုင်းအဝိုင်း၌သူ၏အွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အချိန်သိသိသာသာပမာဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
abstinence -attempting ပက်ထရစ် (40, P_akeh_a)
သူသည်မိမိအညစ်ညမ်းကြည့်အစည်းအဝေးများများ၏ကြာချိန်အဖြစ်သူကြည့်ရှုအားပေးထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင့်ပက်ထရစ်ပစ္စုပ္ပန်သုတေသနများအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်း။ မှန်မှန်ပက်ထရစ် ပိုင်ရှင်မဲ့ကသူ့ကလေးငယ်ကိုသားထွက်ခွာနေစဉ်အချိန်တွင်နာရီပေါင်းများစွာအဘို့အညစ်ညမ်း watched play နှင့် / သို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ဖို့ဧည့်ခန်းထဲမှာ။
ရငျးနှီးမှုအတွက် Pedro (35, P_akeh_a) -a အစားထိုး
Pedro တစ်ကညာအဖြစ် Self-သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Pedro သူမိန်းမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးမှာမိမိအတိတ်ကြိုးစားမှုနှင့်အတူကြုံတွေ့အရှက်ကွဲခြင်း၏ခံစားခကျြနဲ့ပတျသကျတဲ့ပြောဆိုသော။ မိမိအကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်တစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့ကနေသူ့ကိုတားဆီးတဲ့အခါမှာမိမိအပါဆုံးမကြာသေးမီအလားအလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူ ......... ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအားမိမိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုစွပ်စွဲ ..
ပတေရုသ (29, P_akeh_a) တရားအားထုတ်ခြင်း၏ဖွရောင်ပြန်ပါဝါ
ပေတရုစားသုံးခဲ့သည်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာအမျိုးအစားနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။ သူကအဓမ္မပြုကျင့်မှု၏လုပ်ရပ်များနှင့်ဆင်တူစေညစ်ညမ်းစေရန်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ T ကဒါကြောင့်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာသူကမြင်ကွင်းတစ်ခုပုံဖော်လက်တွေ့ကျကျပိုပြီးအစစ်အမှန်နှင့်ပိုမိုဆွသူတွေ့ကြုံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပတေရုသညစ်ညမ်း၌သူ၏တိကျသောအရသာသူသညျမိမိအဘို့ကျင်းပခဲ့သောကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများတစ်ဦးကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြသလိုခံစားရတယ် ... ..
ပတေရုသတှေးတောဆငျခွစတင်ခဲ့ပြီးနောက်, သူ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလုံးဝမပြောဘဲနေကြ၏။ တှေးတောဆငျခွ၏ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်သူတရားထိုင်သူရှာကြံ-နှင့်ခဏမရရှိစ-ပြီးနောက်သူညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့အတိအကျခံစားခကျြခဲ့ကြသည်ပြီးနောက်တည်ငြိမ်ခြင်း, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ရောငျ့ရဲ၏ခံစားခကျြကိုသူကြုံတွေ့သဘောပေါက်လာတယ်။
ပယ်ရီ (22, P_akeh_a) -greater Self-လက်ခံမှု
ပယ်ရီသည်မိမိညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကျော်မျှထိန်းချုပ်ခဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအထူးအမျက်ဒေါသ, သူစိတ်ခံစားမှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ထိန်းညှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းခဲ့ခံစားခဲ့ရ. သူကရှည်လျားလွန်းဘို့ညစ်ညမ်းထံမှကြားနေလျှင်သူဟာအကြမ်းအားဖြင့် 1 သို့မဟုတ်2ရက်သတ္တပတ်၏အကာလအဖြစ်ဖော်ပြထားရာ, မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှာကြိမ်တိုင်တိုင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လူမှုရေးအခင်းအကျင်းတွင်အမျိုးသမီးများတွေ့ဆုံသည့်အခါထို့အပြင်ပယ်ရီဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုချဉ်းကပ်လာသောအခါသူကချက်ချင်းကြုံတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အပြစ်ခံစားချက်တွေကိုကြုံတွေ့ ......
လေ့လာမှု၏အဆုံးအားဖြင့်ပယ်ရီစုစုပေါင်းအကြိမ်ရေနှင့်ကြာချိန်ကိန်းဂဏန်းများသာအနည်းငယ်ကျဆင်းနေပေမယ်တဖန်သူ၏အသုံးပြုမှုလက်ခံ feeling ကဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတစျခုလုံးကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအတွေ့အကြုံကိုသူ့ကိုဘာကြောင့်, ဘယ်လိုပိုပြီးအောက်မေ့ခြင်းနှင့်သတိခံစားရတယ်, သူသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောအခါ, ဖန်ဆင်းတော်ကပြောပါတယ်။ ပယ်ရီညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ဆက်လက်သော်လည်း, သူသည်နောက်တဖန်မကပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်ခံစားခဲ့ရနှင့်ညစ်ညမ်းအပေါ် ruminating နှင့်ကြမ်းတမ်းစွာကျော်ကိုယ်တော်တိုင်စီရင်တော်သိသိသာသာလျော့နည်းအချိန်ဖြုန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
ပါပလော (29, P_akeh_a) မွေးမြူရေး၏ဖွအဆုံး
လေ့လာမှုစတင်တဲ့အခါ, ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသည်၎င်း၏ခံစားခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့သူအပေါင်းတို့ဆုံးရှုံးခဲ့, သူသည်သာအလေ့အကျင့်များနှင့်ပျင်းထဲကစောင့်ကြည့်။ လေ့လာမှု၏အဆုံးခြင်းအားဖြင့်, Pablo တစ်ဦးပြဿနာလမ်းအတွက်ကြောင့်ကြုံတွေ့ရခြင်းမရှိဘဲညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ပါပလောနေစဉ်''ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု s ကိုအကြိမ်ရေသာသူမရှိတော့ညစ်ညမ်းအပေါ် ruminating အချိန်သိသိသာသာပမာဏသုံးစွဲအဖြစ်သူ၏ခြုံငုံကြာချိန်သိသိသာသာကျဆင်းသွားအနည်းငယ်လျှော့ချခဲ့ပြီး သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာရှာဖွေနေ။